ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိပါသလား။ လောင်ဂျီတွဒ်ဒေတာ (၂၀၁၇) မှအထောက်အထား - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများတစ်ဦးကရိုမန်းတစ်အဖွဲ့ဟာစမ်းသပ်ပါမှပိုတူသနည်း longitudinal ဒေတာများ (2017) မှသက်သေအထောက်အထားများ
အပြည့်အဝ PDF ကိုမှ Link ကို။
ယခင်သုတေသန, အချို့သောအခြေအနေများတွင်, ထိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုအဆိုးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးပဲစောင့်ကြည့်ညစ်ညမ်းနောက်ပိုင်းမှာရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတော်လေးနည်းနည်းကိုငါသိ၏။ ဒီလေ့လာမှုကညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအအမေရိကန်များ, ရှိသမျှမှာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏဖြစ်စေ, အချိန်ကျော်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာအဖွဲ့ဟာကြုံနေရသတင်းပို့ဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ longitudinal data တွေကိုအမေရိကန်ဘဝလေ့လာမှု (N ကို = 2006) ၏တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ် Portraits ၏ 2012 နှင့် 969 လှိုင်းတံပိုးကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ binary Logistic ဆုတ်ယုတ် 2006 အတွက်မှာအားလုံးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးသူကိုအမေရိကန်တွေပင်ထိုကဲ့သို့သော 2012 ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းများနှင့်အခြား sociodemographic ဆက်စပ်မှုအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအချက်များအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်, 2006 ကရင်ခုန်စရာအဖွဲ့ဟာကြုံနေရအစီရင်ခံရန်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှသောသူကဲ့သို့နီးပါးနှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြလေ့လာဆန်းစစ်။ ဤသည်အသင်းအဖွဲ့လက်ထပ်အမေရိကန်တွေအဘို့ထက်မိန်းမတို့အဘို့နှင့်လက်မထပ်ရသေးအမေရိကန်တွေအဘို့ထက်ယောက်ျားဘို့သိသိသာသာအားကောင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံသား 2006 နှင့် 2012 ကအဖွဲ့ဟာကြုံနေရ၎င်းတို့၏လေးသာမှုအတွက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးပုံကိုမကြာခဏကြားတစ်ဦး linear ဆက်ဆံရေးမျိုးပြသလေ့လာဆန်းစစ်။ တွေ့ရှိချက်အစောပိုင်းကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်ယောက်ျားနှင့်လက်မထပ်ရသေးဘို့, အမေရိကန်များ '' ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွင်းအနိမ့်တည်ငြိမ်မှုကိုခန့်မှန်းကြောင်းအတည်ပြု။ အနာဂတ်သုတေသနအတွက်ဒေတာန့်အသတ်နှင့်သက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
တစ်ဦးအဖွဲ့ဟာကြုံနေရအမျိုးသမီးတွေများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသာ (34 ရာခိုင်နှုန်းကနေ 15.4 ရာခိုင်နှုန်း) ကြည့်ရှုအစောပိုင်းက porn နှင့်အတူ 23.5 ရာခိုင်နှုန်းကအကြောင်းကိုမြင့်တက်နေစဉ်, တစ်ဦးအဖွဲ့ဟာကြုံနေရအထီး porn အသုံးပြုသူများအများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုနှိုင်းယှဉ် Non-porn အသုံးပြုသူများသည် (3.5 ရာခိုင်နှုန်းကြောင်း 22.5 ကြိမ်ကျော်ခဲ့ 6.3 ရာခိုင်နှုန်း) ။
2006 အတွက်အကြိမ်ရေကြည့်ရှု porn ပြည်၌ရှိသမျှသောယူနစ်တိုးဘို့, 2012 ကအဖွဲ့ဟာကြုံနေရ၏အလေးသာ 14 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။
အားလုံးမှာသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်လှိုင်းအတွက်ဖြစ်စေအစောပိုင်းကညစ်ညမ်းကြည့်, 2006 အတွက်လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့သူအမေရိကန်နိုင်ငံသားများအတွက်အဖွဲ့ဟာ၏သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်းပြန်နှစ်ခုလုံးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအတိုင်းအတာလက်မထပ်ရသေးသူအပေါင်းတို့သူတို့အဘို့အဖွဲ့ဟာ၏သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်းကြသည်။
လက်မထပ်ရသေး Non-သုံးစွဲသူများထိန်းချုပ်မှု၏အသားတင်သာ 44 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လက်မထပ်ရသေး porn အသုံးပြုသူများသည် [အတွေ့အကြုံရှိ] တစ်ဦးအဖွဲ့ဟာ၏ခန့်မှန်းခြေ 24.5 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို“ တစ်ခါမှ” မကြည့်ဖူးသူများအနက် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ပြိုကွဲသွားသည်၊ သို့သော် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုသူများအတွက်ထိုအရေအတွက်သည် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်ခဲ့သည်။
ဖြေဆိုသူ, ဤအချိန်ဘောင်အတွင်းမှာမတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီမြောက်မြားစွာဆက်ဆံရေးကိုချွတ်ချိုးကြပြီနိုင်ဘူး။ သို့သျောလညျးဤအကန့်သတ်မညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်း, အထူးသဖြင့်ယောက်ျား, သိသိသာသာပိုအဖွဲ့ဟာကြုံနေရသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဟာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအစောပိုင်းကအပေါ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုကြိမ်နှုန်းအတွက်နီးပါးတိုင်းတိုးနှင့်အတူတိုးပွားလာကြောင်းအစီရင်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောင်းလဲ ထို့အပြင်ဤအသင်းအဖွဲ့များအလားအလာရှက်ကြောက်အမျိုးမျိုးများအတွက်ထိန်းချုပ်လျှင်ပင်ကြံ့ခိုင်ခဲ့ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအမျိုးသမီးများထက်များသောအားဖြင့်ရှုမြင်လေ့ရှိပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ (Bridges & Morokoff, 2011; Maddox et al ။ , 2011; Poulsen et al, 2013)၊ ထိုမီဒီယာမှတစ်ဆင့်ပေးပို့သောသတင်းစကားများကြောင့်ပိုမိုထိရောက်လိမ့်မည်။
ညစ်ညမ်းတဲ့ဆကျဆံရေးတည်ငြိမ်မှုလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအရာမှတဆင့်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်း [ကမရိုးသားမှုသို့မဟုတ်ပုန်းကွယ်ဖို့ချိတ်ဆက်ထားပြီးအထူးသဖြင့်လျှင်, မလုံခြုံမှုသို့မဟုတ်သစ္စာဖောက်၏ခံစားချက်များကို] ဆက်ဆံရေးမိတ်ဖက်မှတဆင့် ပို. တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးရန်၎င်း၏ connection ကိုရတတ်၏။
ဤသည်အစောပိုင်းကနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအနာဂတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်အဖွဲ့ဟာ၏အမေရိကန်များ '' ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပုံဖော်, သူတို့သည်လက်ရှိ၌ရှိကြ၏မဟုတ်ပဲသူတို့အခြင်းအလိုငှါအကြံပြုထားသည်။ ဤသည်ကိုလည်း scripting နည်းရှုထောင့်မှထောက်ခံမှုချေးလိမ့်မယ်။
ဒီလေ့လာမှုကအစောပိုင်းကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနောက်ပိုင်းမှာအပေါ်တစ်ဦးအဖွဲ့ဟာကြုံနေရ၏ကြီးမြတ်သောဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်ရှာ၏။ အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ဦးတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာကနေ longitudinal data တွေကိုအသုံးပြုခြင်း, တွေ့ရှိချက်များကိုအောက်ပါခြောက်နှစ်အတွင်းတစ်ဦးရင်ခုန်စရာအဖွဲ့ဟာကြုံနေရတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်း, နှစ်ဦးစလုံးယေဘုယျအားဖြင့်, ထိုအစောပိုင်းကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့် သာ. ကြီးမြတ်အသုံးပြုမှုကိုအကြိမ်ရေမှသက်ဆိုင်ရာပါပြီ။ ထို့ပြင်အမျိုးသားများရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အမျိုးသမီးများ၏များထက် porn မှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်ပုံရသည်ကြောင်းကိုကျားအလယ်အလတ်အစောပိုင်းက porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့ဟာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြားအသင်းအဖွဲ့ပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အချိန်ကျော်အစောပိုင်းက porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်အဖွဲ့ဟာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြားအသင်းအဖွဲ့ 2006 အတွက်လက်မထပ်ရသေးဘူးသောသူလူပုဂ္ဂိုလ်များမှအဓိကအားတိုးချဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့လေ့လာဆန်းစစ်။ 2006 အတွက်လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့က porn အသုံးပြုသူများသည် (ပုံ3ကိုကြည့်ပါ) ဖြစ်လျှင်, ဒီအသင်းအဖွဲ့စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုမမှီအဖွဲ့ဟာတွေ့ကြုံခံစားဖို့အတန်ငယ်ပိုများပါတယ်သလိုပဲနေစဉ်။
ဤလေ့လာမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်းမပြုမီ၊ အနာဂတ်သုတေသနအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုချနိုင်ရန်အတွက်အချက်အလက်များကန့်သတ်ချက်များစွာကိုအသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။ ပထမနှင့်အထင်ရှားဆုံးအချက်မှာဒေတာသည် ၂၀၀၆ မှ ၂၀၁၂ အကြားဘာကြောင့်ပြတ်တောက်မှုကြုံတွေ့ရသည်ကိုတိတိကျကျမသိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြေဆိုသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်တည်မြဲသောဆက်နွယ်မှုကိုပြတ်တောက်စေခြင်းရှိမရှိကိုသာမေးမြန်းခဲ့ပြီးအများစုအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဆက်စပ်သောအကန့်အသတ်တစ်ခုမှာဖြေကြားသူများသည်ဤအချိန်ကာလအတွင်းတွင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်များစွာသောဆက်ဆံရေးကိုပြတ်တောက်သွားစေနိုင်သည်။ သို့သော်ဤကန့်သတ်ချက်များမှအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများနှင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများသည်ကွဲလွဲမှုကြုံတွေ့ရသည်ကိုအစီရင်ခံရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်၊ သို့မဟုတ်ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေသည်အစောပိုင်းက porn ကြည့်ရှုမှုအကြိမ်ရေများပြားလာခြင်းနှင့်အတူတိုးပွားလာသည်ဟူသောအချက်ကိုမပြောင်းလဲစေပါ။ ထို့အပြင်ဤပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှုပ်ထွေးသောဖြစ်နိုင်ချေအမျိုးမျိုးကိုထိန်းချုပ်သည့်အချိန်တွင်ပင်အားကောင်းခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်ဖြေဆိုသူများအားသူတို့၏ဆက်ဆံရေးသမိုင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုပြိုကွဲစေသည့်အကြောင်းရင်းများကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ တတိယအကန့်အသတ်တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်သာတိုင်းတာနိုင်သည့်အတွက်ဖြေဆိုသူများသည်နောက်လှိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းရှိမရှိကိုလေ့လာမှုမပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်များသောအားဖြင့်အချိန်ကာလနှင့်အဖြစ်အပျက်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိဘဲစီးဆင်းနေသည် (Paul, 2006) ။ ဆက်နွယ်သောကန့်သတ်ချက်တစ်ခုမှာဒေတာသည်တုံ့ပြန်သူကြည့်ရှုနေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားကိုမဖော်ပြသည့်သို့မဟုတ် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ၄ င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အမှန်တကယ်ကြည့်ရှုခြင်းရှိမရှိကိုညွှန်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယခင်လေ့လာမှုများအရဤအချက်များနှင့်အထူးသဖြင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုလက်တွဲဖော်နှင့်ကြည့်ခြင်းရှိ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအလယ်အလတ်ခွဲခြား (Bridges & Morokoff, 2012; Maddox et al, 2006; ။ Poulsen et al ။ , 2005; Willoughby et al, 2006) ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည် dyadic data ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသည်ဤဆက်ဆံရေးများ၌လုပ်ငန်းခွင်ရှိတိကျသောယန္တရားများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ဤရွေ့ကားန့်အသတ်လက်ရှိလေ့လာမှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်စာပေမှလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းနှင့်အတော်ကြာအရေးကြီးသောနည်းလမ်းရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုသျောလညျး။ ပထမဦးစွာတွေ့ရှိချက်အစောပိုင်းကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာအထူးသဖြင့်လူတို့သညျအဘို့, relational မတည်ငြိမ်မှုခန့်မှန်းကြောင်းအတည်ပြု။ သူတို့ယောက်ျားဖြစ်လျှင်ဖွယ်ရှိကဲ့သို့သောအခြားသက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းကြည့်ရှုကနဦးစစ်တမ်းအောက်ပါခြောက်နှစ်အတွင်းတစ်ဦးရင်ခုန်စရာအဖွဲ့ဟာတွေ့ကြုံခံစားဖို့နီးပါးနှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိ ရှိ. , 3.5 ကြိမ်ကျော်ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကျင်းပခြင်း။ ထို့အပြင်ဤဆက်ဆံရေးမျိုးသာမကလူတစ်ဦး၏အသက်တာ၌ညစ်ညမ်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖို့ကိုတိုးချဲ့, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်မကြာခဏသူတို့ညစ်ညမ်းရှုမြင်ကြသည်။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , ပိုမကြာခဏတစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ 2006 ကရင်ခုန်စရာအဖွဲ့ဟာတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်, 2012 အတွက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေး.
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆက်နွယ်မှုတည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုသည်ကွဲပြားသောလမ်းကြောင်းများမှစီးဆင်းနိုင်သည်။ လူမှုရေးသင်ယူမှုနှင့် scripting သီအိုရီများအပြီးတွင်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများကိုသူတို့ကိုပုံသဏ္ityာန်ဖြစ်စေပြီးသစ္စာရှိမှုကိုတန်ဖိုးထားစေသည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပုံသဏ္orာန်သို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်သောလက်တွေ့မမျှော်လင့်ချက်များရှိခြင်းကြောင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကတိသစ္စာကိုအပျက်သဘောသက်ရောက်နိုင်သည် (Gagnon & Simon, 1973) ; ။ Sun et al, 2016; Weinberg, et al, 2010; Wright, 2013; Wright et al 2013; ။ Wright et al, 2014; Zillmann & Bryant, 1988) ။ ဒါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနဲ့ပြိုကွဲခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုကဘာကြောင့်အမျိုးသားတွေအတွက်ပိုခိုင်မာရတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအမျိုးသမီးများထက်များသောအားဖြင့်ရှုမြင်လေ့ရှိပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ (Bridges & Morokoff, 2011; Maddox et al ။ , 2011; Poulsen et al, 2013)၊ ထိုမီဒီယာမှတစ်ဆင့်ပေးပို့သောသတင်းစကားများကြောင့်ပိုမိုထိရောက်လိမ့်မည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်ဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာဆက်ဆံရေးမိတ်ဖက်မှတစ်ဆင့်၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုကိုပိုမိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုများမကြာခဏအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြု။ ၎င်းတို့၏အဖော်အားအပျက်သဘောတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့မပါဘဲလျှင် (Bergner & Bridges, 2002; Bridges, Bergner, & Hesson-McInnis, 2003; Daneback, et al ။ , 2009 ။ ; ။ Grov, et al, 2011; Schneider, 2000; Stewart က & Szymanksi, 2012; Zitzman & ဘတ္, 2009) ။ မိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်အထူးသဖြင့်မရိုးသားမှုသို့မဟုတ်ပုန်းအောင်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိပါကမလုံခြုံမှုသို့မဟုတ်သစ္စာဖောက်မှုခံစားမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ လိင်ကွဲစုံတွဲများစွာသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအတူတကွကြည့်ရှုပြီး၎င်းသည်ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ကိုတွေ့ရစဉ် (Maddox et al ။ , 2011; Willoughby et al, 2016) ။ ယောက်ျားများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုသာဤကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးများ၌အမျိုးသမီးများထက်များစွာ ပို၍ အသုံးပြုကြသည်၊ အမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်မလုံလောက်၊ လုံခြုံမှုကင်းမဲ့သည်ဟုခံစားရပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်ဆက်ဆံရေးကိုကတိကဝတ်ပြုခြင်း၊ နာကြည်းခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်နိုင်ချေပိုမိုများပြားစေသည်။ အဖြစ်မှန်၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်ဤလမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံး၊ အဆင့်အမျိုးမျိုးနှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့အတွက်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ အနာဂတ်သုတေသနသည်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးနှင့်အရည်အသွေးပြည့်မီသောအင်တာဗျူးများမှတစ်ဆင့်ဤရွေ့လျားမှုကိုထပ်မံရှာဖွေနိုင်သည်။
တစ်ဦးကစက္ကန့်ဆိုလိုဖြစ်စေ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (စျေး et al ။ , 2016) United States မှာတိုးပွားလာနှင့်အဓိကအားဖြင့်အမေရိကန်လူငယ်များအကြားကြောင့်, relational မတည်ငြိမ်မှုကိုလည်းတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ porn အသုံးပြုမှုကိုသူ့ဟာသူ relational ပြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုအသုံးပြုဖို့သူအအမေရိကန်တွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထောက်အကူပြုသောကွောငျ့ ညစ်ညမ်းပြီးသား relational အဖွဲ့ဟာပိုပြီးကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့အဆိုးကြားဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးရင်တောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကအစောပိုင်းကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖြစ်နှင့်သောသူတို့အဘို့အနောက်ပိုင်းမှာ relational အဖွဲ့ဟာခန့်မှန်းကြောင်းထောက်ပြရန်အရေးကြီးပါသည်နှစ်ဦးစလုံး တခုတည်းသော 2006 အတွက် (လက်ထပ်ဘယ်တော့မှ) ။ ဤအအမေရိကန်တွေအချို့ကိုကျူးလွန်ချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ပါပြီစေခြင်းငှါ, စဉ်တွင်, များစွာသောအချိန် unattached ဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤသည်အစောပိုင်းကနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်အဖွဲ့ဟာ၏အမေရိကန်များ '' ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပုံဖော်စေခြင်းငှါအကြံပြု အနာဂတ် ဆက်ဆံရေးမဟုတ်, သူတို့ကလက်ရှိ၌ရှိကြ၏ရုံရှိသူများ။ ဤသည်ကိုလည်း scripting နည်းရှုထောင့်မှထောက်ခံမှုချေးလိမ့်မယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအချိန်ကျော်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်အဖွဲ့ဟာနှင့်ကွာရှင်းပိုမိုသာဓကဖြစ်စေဆက်စပ်ပုံကိုစူးစမ်းလေ့လာသင့်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်, အခြားဘက်မှာ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကတည်းကနိမ့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှုန်းရိုးရာကြားဆက်ဆံရေးပုံစံများများအတွက်လေးစားမှုကိုလျော့ကျစေရေးနှင့် / သို့မဟုတ်လက်ထပ်ရတဲ့ disincentivize လိမ့်မည်။